कहाँ कस्तो रहला आजको मौसम ? - Man Xune Kura
कहाँ कस्तो रहला आजको मौसम ?
हाल देशमा पश्चिमी वायुको सामान्य प्रभाव रहेको छ। जसले गर्दा सुदूरपश्चिम प्रदेश, कर्णाली प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश र गण्डकी प्रदेशमा आंशिक बदली रहेको छ।मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार आज दिनभर देशभर आंशिक बदली रहनेछ। त्यसका साथै गण्डकी प्रदेश र कर्णाली प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका एक-दूई स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावनासमेत रहेको छ।
यस्तै आज राति देशभर आंशिक बदलीको संभावना रहेको छ। बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र प्रदेश नम्बर १ का उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका एक/दुई स्थानमा हल्का हिमपातको संभावना रहेकाले चिसो बढ्न सक्ने भन्दै मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले स्वास्थ्य सावधानी अपनाउन आग्रह गरेको छ। केही दिन पहिले भएको वर्षा र हिमपातका कारण यतिबेला देशैभर चिसो बढेको छ।
थप् समाचार :कतिपय सपनामा मानिसले आफूलाई डरलाग्दो स्थितिमा पाएर डराउने गर्दछन् । कतिपय यस्ता सपना अशुभको संकेत समेत मानिन्छ । साथै जीवनमा आउने घटनाको संकेत र मानसिक बीमारीको समेत संकेत मानिन्छ केही सपना । यस्तोमा कस्ता सपना अशुभ मानिन्छ त्यसबारे जान्नु पर्दछ ।
स्वप्नशास्त्र अनुसार आफूलाई यात्रा गर्दै गरेको देख्नु, कपाल काटेको वा गधामा बसेको देख्नु अशुभ मानिन्छ । यस्ता सपना भविष्यमा हुने ठुलो हानीको संकेत मान्ने गरिन्छ । यस्तै सपनामा कसैले आफूलाई सुकेको फूलको माला लगाइ दिएको देख्नु समेत अशुभ मानिन्छ । यस्तै आफूले सेतो कपडा लगाएको सपना देखे कसैसँग वियोग हुने संकेत गर्दछ ।
सपनामा आफूलाई रोएको, चिच्याएको वा गुहार लगाएको देख्नु समेत मानसिक स्वास्थ्यका लागि राम्रो सपना मानिँदैन । यी सपना व्यक्तिमा असुरक्षाको भावनाको संकेत गर्दछ । यस्तै सपनामा आफूलाई कहीँ फसेको र कोसिस गर्दा पनि निस्कन नसकेको देखिए आत्मविश्वासको कमीको संकेत गर्दछ । सपनामा आफूलाई कसैले पछ्याइरहेको देख्नु जीवनमा आफूमाथि कोही हाबी भएको संकेत मानिन्छ ।
The post कहाँ कस्तो रहला आजको मौसम ? appeared first on Nepkhabar24.
Previous: गैर आवासीय नेपाली संघलाई अनिर्णयको बन्दी बनाइयोः कुल आचार्य
Next: राष्ट्रियसभाका उम्मेदवार टुंगो लगाउन एमाले सचिवालय बैठक जारी